81-jir haysata PhD oo qashinka gurta - BBC News Somali
8 Juunyo 2017
Image caption Saynab Muqallid
"Meelkasta qashin ayaa daadsanaan jiray carruurtuna waa ay ku wasakhoobi jireen," ayay tiri Saynab Muqallid.
Waxay xasuusataa 1980-tamaadkii ilaa 90-meeyadii, markii Israa'iil ay 15 sano haysatay qeybo ka mid ah koonfurta dalka, markaas oo qashin uu xiray tuuladeeda, Carabsaalim.
"Maxaad u danaynaysaa? Paris ma joogno," ayuu ku yiri.
"Waan ogaa maalinkaas waxaa qasab igu aheyd inaan aniga qabto howshaas," ayey tiri.
Muqallid ayaa isugu yeertay haweenka tuulada si ay gacan u siiyaan, raggiina faraha ayey ka qaadday - sababtoo ah waxay doonaysay inay iyaga xoojiso, malaha waxay moodaysay inay tahay inay qabtaan shaqo middaas ka wanaagsan.
Tobanaan qof oo ku dhimatay fatahaadda Peru
Image caption Khadiija Farxaat ayaa keentay loori si loogu qaado qashinka dib loo habeynayo
Image caption Webi qashin ah oo Bayruut ka dilaacay kahor inta aanan bishii Maarso ee 2016 loo wareejin goob qashinka lagu qubo
Kaddibna dowladda ayaa sheegtay inay dhoofinayso qashinka go'aankaas oo ay bilo kaddib ka laabatay.
Image caption Waxaa la arkay gawaari qaadaysa qashinka kuna qubaysa badda Mediterranean
Isbeddelka cimilada : Heerka gaaska CO2 ee adduunka ayaa gaartay meel cusub
Trump oo diiday heshiiska isbedelka cimilada
Image caption Dhul si ku meel gaar ah qashinka loogu qubo ayaa u dhaw garoonka diyaaradaha ee Bayruut